YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, January 03
“၅၉ (စ) က ကျနော်တို့က ဒီလိုပါ။ သားမက်တွေ၊ ချွေးမတွေကို ဖြေလျှော့ပေးထားတာပေါ့နော်။ ဥပမာဗျာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မူတည်ပြီး ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ့ယောက်ကျားက Michael Aris သူကသေသွားပြီ။ သေသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့မှာသား ၂ ယောက်ရှိတယ်။ သား ၂ ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် သူက ပြီးသွားပြီ။ သူတို့ရဲ့ ချွေးမတွေရှိတယ်။ ချွေးမတွေကို ဒါကို ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တယ်။ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ။ ချွေးမ ၂ ယောက်က ဘာမှ အကျုံးမ၀င်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဦးမြင့်ဆွေကို ဒုသမ္မတ ပေးမယ်ဆိုတုန်းက သူ့ချွေးမက သြစတြေးလျသူ ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ မပေးဘူးလေဗျာ။ တကယ်လို့ Kim Aris နဲ့ Alexander Aris တို့ရဲ့ သူတို့မိန်းမ ၂ ယောက်က ချွေးမတွေက နိုင်ငံခြားသူ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အခြေခံဥပဒေက ခွင့်ပြုမယ်။” (ကြံခိုင် အမတ် ဦးလှဆွေ ရဲ့ ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောဆိုချက်)
အော်အော် ကြံခိုင်ရေးက ပြင်ဆင်လိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေတခုပေါ့နော်။ မှတ်သားစရာပဲ။ စိတ်ပျက်တာများ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးအမတ်မင်းများရယ်.....
နိုင်ငံကိုအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့အချက်မှာလည်း မိုက်ကယ်လ်အဲရစ်လို နိုင်ငံခြားသားတဲ့လား။ တကယ့်ကို သေးသိမ်တဲ့အတွေးအခေါ်ပါပဲ။ နိုင်ငံဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်ပေးခဲ့တာ၊ အများပြည်သူဒုက္ခ သောကတွေရောက်ခဲ့တာဟာ န၀တ/နအဖ စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေတွေကြောင့်ပါပဲ အမတ်မင်းရယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားသူမှန်သမျှ မည်သူမဆို သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတဲ့အချက် တခုနဲ့တင်လုံလောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထပ်လို့ သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတို့၊ သားသမီးတွေက အခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားလို့ သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးတို့ဆိုတာ လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားလာတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မရှိသင့်တော့တဲ့အကန့်အသတ်တခုလိုမြင်ပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 1/03/2014 1 comment
၂၀၁၃ ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ မှာ ဒီစာကို ရေးပါတယ်.
အထူးသဖြင့် အကယ်ဒမီပေးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒါဒါ ရေးတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရအောင်လို့ပါ..
တချို့တွေကရေးတဲ့ အကြောင်း အရာနဲ့ မပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စ တွေ ထည့်ထည့်ပြောလာလို့ပါ.
အကယ်ဒမီပေးပွဲဆိုတာ အနုပညာသည်တွေရဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပွဲပါ..တန်ဖိုးထားရလို့လဲ တက်ချင်ကြလို့လဲ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး မှာ လက်မှတ်တကူးတကသွားထုတ်ပြီး သွားကြတာပါပဲ..
ဒါဒါတို့ ငယ်ငယ်ထဲက ထို်င်ခုံဆိုလဲ သူ့ ဝါ နဲ့ သူထို်င်ရတာပါ.တကယ့် ဝါရင့် မင်းသားမင်းသမီး ပညာရှင်ကြီး တွေက ရှေ့ဆုံး..
ပြီးတော့မှဇာတ်ဆောင်အကယ်ဒမီရှင်တွေ..ဇာတ်ပို့ အကယ်ဒမီတွေ ..အဲ့ဒီလိုပဲ ထိုင်ကြတယ်လို့ နားလည်တယ်.ထိုင်လဲထိုင်ခဲ့ရတယ်..
မနှစ်ကတော့ ဝါရင့်သက်ကြီးအနုပညာရှင်တွေ ကသတ်သတ်ထိုင်ပြီး မကြီးတို့ကို ရှေ့တန်းတွေမှာနေရာပေးတယ်.ဒါဒါကမကြီးနဲ့သွားထိုင်တယ်..မနှစ်က ရှေ့ဆုံးဆိုတော့ media တွေတိုးဝှေ့တာခံရလို့လဲ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး status ရေးခဲ့ပါသေးတယ်..
ဒီနှစ်မှာတော့ ပွဲကခမ်းခမ်းနားနားလဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ မကြီးမတက်ဖြစ်တာတောင်သွားချင်လွန်းလို့သွားတာပါ..ဒါဒါ ကမကြီးနေရာမှာထိုင်ပါတယ်..
နောက်တော့ မကြီးမပါဘူးလား မေးတဲ့သူတွေ.. မကြီးခုံကဘယ်မှာလဲမေးတဲ့သူတွေ..
ဘာလို့ နောက်မှာဖြစ်နေလဲလို့ မေးတဲ့သူတွေ ကြောင့် ကြည့်လိုက်တော့မှ အကုန်လုံးက ရှေ့မှာ..
မကြီးက ဒါဒါ ထိုင်တဲ့ဘေးမှာ..
ဒါဒါ့ ညီမ စိုးပြည့်သဇင် ဆို နောက်တန်းမှာ..
ဟုတ်ကဲ့ ပုထုဇဉ် ပါ..ဒါဒါ စိတ်ဆိုးတယ်.. ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်ကိုလုပ်ရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး..မကြီး ကိုလုပ်လို့ကိုစိတ်ဆိုးတာ..
ခုံပဲ ဘယ်နေရာထိုင်ထိုင်ပေါ့လို့ ပြောချင်တဲ့သူရှိလိမ့်မယ်..ပြောပါစေ.ဦးဏှောက်နည်းလို့ ပြောတာပြောကြပါစေ..
ငါ့စကားနွားရ ထိုင်ခုံစီတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီလောကသားတွေ ကို ဦးဆောင်တဲ့သူလုပ်နေမှတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုထိုင်လဲ ဆိုတာကြည့်သင့်တယ်..ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် လာမပြောနဲ့..ဒါလေးတောင် တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆို ရင် တော့........................
ဒီနေရာ မှာ ဦးမြင့်သိန်းဖေ ဆိုလဲ ဒီလို စိတ်ဆိုးမှာပဲ.
ဦးဇင်ဝိုင်း ဆိုလဲ ပြောမှာပဲ..
မဆီမဆိုင် အရင်ကကိစ္စတွေကို မမေ့နိုင်ပဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေပါထည့်ထည့်ပြောနေကြတာ အံ့သြတယ်..
ပွဲ အစီအစဉ် မကျဘူးဆိုတာကလဲ..
သွားရတာ လာရတာကိုပါ..မပြောရင်သာနေမယ် တခြားအနုပညာရှင်တွေပါ ဒီလိုခံစားရမှာပဲ..
ဝင်ကတည်းက ဘယ်သွားလို့ သွားရမှန်းမသိ..
ပြန်တော့လဲ ရုပ်ရှင်ပြီးသွားလို့ ထပြန်ကြတဲ့ပုံစံ.
ဒါတွေကို အနုပညာရှင်အနေနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မရှိလို့လား..
ကလေးကလား ဆန်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးတွေကိုတော့ ဒါဒါ က အဖက်မလုပ်ပါဘူး..
"လူတိုင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူ ရှိတယ်.ငါထိုင်ခုံစီတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း မပီသတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ လစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင်တော့......
ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ဒီနှစ်တော့ ထားလိုက်ပါ..
နောက်နှစ်များတော့ ကိုယ့်လောကသားတွေ ဘယ်လိုနေရာမျိုး ဘယ်လိုပုံစံမျိုး နဲ့ ထိုင်ကြလဲဆိုတာကို staffs တွေဆီကနေ seating plan လေး ခဏတောင်းကြည့်ပါ..
ပြန်ကြားရေးဘက်က စီတာဆိုလဲ အနုပညာသည်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ မသင့်တော်ရင်ဖြေရှင်းပါ..ကာကွယ်ပါ..
စိတ် နဲ့ မတည့်တာကို ပရိတ်သတ်ကိုရှင်းပြတာပါ.
နားလည်မှုလွဲနေမှာစိုးလို့..အနုပညာသည် အနေနဲ့ တာဝန်ယူတဲ့လူကို ပြောတာကလွဲပြီး ဘာစိတ်မှမရှိဘူး..
စိုးမြတ်နန္ဒာ ရဲ့ ဘဝကို စိုးမြတ်နန္ဒာကပဲ ဖန်တီးခဲ့တာပါ..
နှစ်သစ်ကစပြီးပရိတ်သတ်များအားလုံး ဒါဒါ့ လို ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ.
BY YeYint Nge ... 1/03/20140comment
မူဂျာဟစ် တို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ထွင်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသော ခေတ်ဟောင်း ကာတွန်း တစ်ကွက်
By Thaung Kwre and Wakkar
စစ်တွေ ၊ ၂၁ ဇွန်န၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၆၀) ၁၉၅၃-ခုနှစ်ထုတ် ရခိုင့်တန်ဆောင် မဂ္ဂဇင်း တွင် ထိုခေတ် မူဂျာဟစ်ဒင် ကုလားဆိုးများ သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တောနယ်မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ခံစားနေကြရပုံကို တစ်ကွက်ကာတွန်းဖြင့် ဖော်ကျူးထားသည်။
ရခိုင့်သမီးပျိုလေးအား လက်ထဲတွင် ဆုပ်ကိုင် လှိုက်ခါရယ်မောနေသည့် မူဂျာဟစ်လက်နက်ကိုင်၏ ခြေရင်းတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများက သေဆုံးနေသည်။ မိသားစုဝင်များက ရပ်ရွာများကို စွန့်ခွာထွက်ပေးနေကြရသည်။ နောက်ခံတွင် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများက မီးလောင်နေသည်။
ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေချိန်တွင် သံဃာယနာတင်ဆောင်သူ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု က စိတ်ပတီးတစ်ကုံး ကိုင်လျက် တရားမှတ်နေသည်။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက သေနတ်ကို ပုခုံးပေါ်တင်ကာ ဘာမှမလုပ်ပဲ မတ်တပ်ရပ်နေသည်။
ထိုခေတ်ထိုကာလ၏ ထိုကာတွန်းက လက်ရှိအခြေအနေထဲက ဖြစ်ရပ်များကို ထင်ဟပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းလိုလားသူ လူသူတော်ကောင်းကြီးများ ဟု အထင်ခံချင်သူ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများမှာ ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီများ၏ ရွာမီးရှို့၊ သတ်ဖြတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်မှုများကို ခံစားနေကြရသည်မှာ အလားတူနိုင်ပေသည်။ ကာတွန်း၏ ယာဘေးဘက်တွင် ကပ်လျက် ရေးဆွဲထားသော မတ်တပ်ရပ်ငြိမ်သက်နေသည့် ကာတွန်းထဲက လုံခြုံရေးတပ်သားပုံမှာ ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ မောင်တောမြို့တွင် မျက်စိရှေ့ မီးရှိုဖျက်ဆီးနေကြသည့် ဘင်္ဂါလီဆူပူသူများကို ပစ်မိန့်မပေးသည့် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးကို အမှတ်ရမိစေသည်။
၁၉၄၂-ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂါလီများက ရခိုင် နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများကို သတ်ဖြတ်သဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးပေါင်း သုံးသောင်း နှင့် တစ်သိန်းကြား သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ဖဆပလ ခေတ်တွင် မူဂျာဟစ်ခေါ် ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူများ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော နှင့် ရသေ့တောင် နယ် တို့တွင် သောင်းကျန်းရာ မောင်တော နှင့် ဘူးသီးတောင် နယ် မှ ရခိုင် နှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရွာပေါင်း နှစ်ရာကျော် သုံးရာခန့် လုံးဝပျက်သုန်းပြီး၊ ကျေးရွာများ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် လယ်မြေများအားလုံးကို ကုလားများက သိမ်းပိုက်ကာ ယနေ့ထက်တိုင် ရယူနေထိုင် အသုံးချနေကြသည်။
ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တော နယ်အတွင်းရှိ သပိတ်တောင်၊ သိမ်တောင်၊ ကျောင်းတော် အစရှိသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နာမည်များ ရှိသည့် ကျေးရွာများ၊ သရေကုန်တန်း အစရှိသည့် ရခိုင်/မြန်မာ အမည်ရှိသည့် ကျေးရွာများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ကုလားရွာကြီးများ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါက ထိုကျေးရွာများမှာ ရခိုင်/မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများက ကုလားများနေရန်အတွက် အသာတကြည် ထွက်ခွာပေးခဲ့ခြင်း မဟုတ်။ လူသတ်၊ မီးရှို့၊ မုဒိမ်းကျင့် (rob-rape-raze) နည်းလမ်းများဖြင့် မနေနိုင်အောင်လုပ်ခြင်းကို ခံရပြီးမှ မတတ်သာလို့ ထွက်ခွာခဲ့ရကာ ကုလားရွာကြီးများ ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု မှန်ကန်စွာ သတိရနေသင့်သည်။
ထိုအချိန်များက မီဒီယာ က မတွင်ကျယ်၊ ယူအန် ဆိုတာ မကြားဖူး၊ အန်ဂျီအို ဆိုလျှင် ဝေလာဝေး၊ ကြက်ခြေနီ လည်းရောက်မလာ ကြသည့်အတွက် အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားရွာ နှစ်ရာကျော် သုံးရာကို နေရာပြန်လည်ချထားပေးရမည် ဟု မည်သူကမှ (re-settlement) အတွက် မတောင်းဆိုခဲ့ကြပေ။
၁၉၅၁-ခုနှစ်မှ စတင် တီထွင် သုံးစွဲခဲ့သော “ရိုဟင်ဂျာ” ဟူသော စကားလုံးမှာ ထိုစဉ်က မတွင်ကျယ်သေးပေ။ ၁၉၅၃-ခု တွင် ပုံနှိပ်ခဲ့သော ဖော်ပြပါ ကာတွန်းတွင် မူဂျာဟိန်း သူပုန် အဖြစ်သာ ရေးသား သုံးစွဲထားသည်။
၁၉၅၁-ခုနှစ်တွင် ဖဆပလ အမတ် အဒူဇော်ဖော က ပါလီမန်ထဲတွင် အဆိုပါ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသော စကားကို စတင်သုံးစွဲပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် ဘီအေ ဘသာ က ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာတွင် ထိုစကားလုံးကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ရာမှ ထိုခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီများသည် ရခိုင်ဒေသတွင် ရှေးအတီတေကပင် နေလာ ခဲ့ကြသည့်လူမျိုး ဖြစ်သည့်ပမာ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကုလားနိုင်ငံရေးသမားများက ထိုကဲ့သို့ဝါဒဖြန့်ချိရေးလုပ်သော်လည်း အောက်ခြေမှ ဘင်္ဂါလီများ ကိုယ်နှိုက်က လွန်ခဲ့သော ၂-နှစ်လောက်ကအထိ ထို “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသော စကားလုံးကိုပင် မကြားဖူးခဲ့ကြချေ။
( Coral Arakan အတွက် သောင်းကြွယ် နှင့် ၀က္ကာ ရေးသားသည်။)
Photo: မူဂျာဟစ် တို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ထွင်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသော ခေတ်ဟောင်း ကာတွန်း တစ်ကွက်
Khine Myo Min
ဒီနေ့မနက်မှာစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုထပ်ပြီးကြားရပြန်တယ်... ၃၁ ရက်နေ့ကမြန်မာမိန်းကလေး ၂ယောက်အသက်ခံရတဲ့နေရာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ မနေ့ကသတ်ပြီးပစ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်....လက်ကိုကြိုးတုပ်ပြီးသတ်ထားတယ်ဆိုကတည်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အုပ်စုဖွဲ့ ရန်ငြိုးထားသတ်တယ်ဆိုတာသေချာနေပါတယ်...အဲဒါကြောင့်မြန်မာနိင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အပြင်တွေထွက်ရင်အများနဲ့သွားကြစေချင်တယ်....
အထူးသဖြင့် လုံးခြင်းအိမ်တွေမှာနေတဲ့သူတွေ လူအသွားအလာနည်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးသတိရှိကြပါ.......။
Author Ko Zaw
မနက် စောစောစီးစီးဗျာ။ အနိဌာရုံကြုံရတယ်။ အခု မြင်နေရတဲ့ ၁၇၄ ဘတ်စ်ကို ကျနော် မြေနီကုန်းကနေ စီးလာခဲ့တာပါ။ မြေနီကုန်းကနေ တော်လှန်ရေးပန်းခြံလမ်းကို ကွေ့တဲ့ နေရာမှာ အရှိန်နဲ့ ကွေ့တယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ တံခါးလည်း ပိတ်မထားဘူး။ ကားက စောင်းအသွားမှာ အဘိုးကြီး တစ်ယောက် ကားထဲကနေ လွှင့်ကျသွားတယ်။ ကားထဲက လူတွေလည်း အော်လိုက်ကြတာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ။ အကျကလည်း တော်တော် ဆိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းနဲ့ မကျပဲ လက်တွေ ခြေတွေနဲ့ လှိ့်ကျသွားပြီး အနောက်ကလည်း ကားမပါလာလို့ ဒူးတွေ တံတောင်တွေ ပွန်းရုံက လွဲလို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အရှိန်နဲ့ ကျသွားတော့ ဒဏ်ရာတွေက သေးတော့ မသေးဘူး။ အခု လောလောဆယ် သွေးပူနေလို့သာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ထင်ပေမယ့် အခုလို ဆောင်းတွင်းမှာ ဆိုတော့ အနာဒဏ်ရာကို တော်တော် ခံရမှာပါ။
ဒီ ၁၇၄ ဘတ်စ် ဆက်မောင်းလာရင်း တာမွေ ဗလီထိပ်ရောက်တော့ ၃၃၃ ကားနဲ့ ကားဂိတ်ကို အပြိုင်တိုးဝင်တယ်။ ကားက မြေနီကုန်းကနေ စမောင်းကတည်းက မတရားမောင်းလာခဲ့တာ။ အခု တာမွေဂိတ်ကိုလည်း အရှိန်နဲ့ တိုးဝင်တာပါပဲ။ ၃၃၃ က ဟိုဘက်က ကားလေးကို ရှောင်လိုက်တော့ ၁၇၄ ကို ဖင်နဲ့ ရိုက်သလို ဖြစ်တာမှာ ၁၇၄ က ဘရိတ်မနင်းပဲ ရှောင်လိုက်တာမှာ လမ်းဘေးမှာ ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို ဝင်တိုက်ပါလေရော။ ဘုန်းကြီး လွှင့်ကို ထွက်သွားတာဗျာ။ ဆွမ်းတွေရော လူရော လမ်းပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲလို့။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးလည်း ကြီးကြီးမားမား ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ဘုန်းကြီး ဘာဖြစ်လဲ ဘာလဲ ဆိုတာ တစ်စက်မှ လာမကြည့်ဘူးဗျာ။ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ၃၃၃ ကားသမားကို ဖင်နဲ့ ရိုက်ရမလား ဆိုပြီး သံတုတ်နဲ့ ဆင်းရိုက်ပါလေရော။
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ယာဉ်မောင်းတွေ ဖြစ်ပျက်နေတာ မြင်ရ တွေ့ရ ကြုံရတာ တော်တော်ကို စိတ်မချမ်းသာ စရာပါ။ မီးပွိုင့်လည်း အတင်အချ လုပ်တာပဲ။ ယာဉ်မောင်းနေစဉ်မှာလည်း တံခါးဖွင့်တာပဲ။ လုပြီးလည်း မောင်းတာပဲ။
ယာဉ်းစီးသူတွေ ဆိုတာ အသက်ကို ဆပ်ပြာပူဖောင်းလေးထဲ ထည့်ထားရသလိုပါပဲလား။
ဂျာမဏီ သံအမတ်ကြီး နှင့် ကိုဇင်မင်ဦး တို့ အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် လက်ခံတွေ့ ဆုံ
ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဂျာမဏီသံအမတ်ကြီး Mr.Wolfgang Ischinger နှင့် ဂျာမဏီနိင်ငံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် လက်တုသွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့သော ကိုဇင်မင်ဦး တို့ အား တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ နေအိမ်တွင် လက်ခံတွေ့ ဆုံခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၉တုန်းကဟန်ညောင်ဝေ ကဘင်္ဂလီများထံသို ပို့ သည့်အီးမေးလ်
မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာ့သွေးစစ်စစ် နောက်ဆုံးစော်ဘွားရဲ့သား ဟန်ညောင်ဝေ က ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ကုလားခေါင်းဆောင်များထံသို ပို့ သည့်အီးမေးလ်
သူနာမည်ကတော့ ဟန်ညောင်ဝေ။ လက်ရှ်ိ ယူရိုဘားမား အဖွဲ့ ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ၊ ဒီဗွီဘီ အသံလွင့် ဌာနရဲ့ ဘုတ်ဒါရိုက်တာ...
NGO ကြီးဖြစ်တဲ့Euro-Burma အဖွဲ့ ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က To promote Democracy in Burma ( ဒီမိုကြေစီကို မြန်မာပြည်မှာ မြှင့်တင်ရန်) တဲ့
မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ လိုဂိန်ညာတွေ ဘယ်လို လုပ်ရှားတယ် ဘယ်ဒေါင့်က ပစ်တယ် ဘယ်နေခြေလှမ်း လှမ်းတယ် ဆိုတာကို
အိုအိုင်စီ ၀င်လာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းရဲ့ အတိမ် အနက်ကို သိလား မသိလား ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မသိ...
၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်မှာ သွေးချောင်းစီး ရတာတွေ ၊ မိတ်ထိလာ ၊ ရှမ်းပြည် တွေမှာ ဖြစ်တာတွေဟာ ဒီလိုပဲဖြစ်လာတာလားဆင်ထားတဲ့ အကွက်တွေလားတော့မသိ..
ဟန်ညောင်ဝေက မြန်မာပြည်ကို ကုလားလက်ထဲရောင်းနေတာက အခုမှ မဟုတ်ပဲ ယူရိုဘားမား အဖွဲထဲရောက်ပြီး ...၂၀၀၀ ခုနှစ် ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဖြစ်နေတုန်းကပင်....
မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ဟန်ညောင်ဝေရဲ့ ခြေလှမ်း ဂိန်ညာတွေ လုပ်ရှားတာတွေ အိုအိုင်စီရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို အော်ရီဒူရဲ့ တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကို နားလည်ဖို့အထောက်ကူဖြစ်ဖို့ ..
ဟန်ညောင်ဝေက ဂိန်ညာအဖွဲတွေကိုပို့ ထားတဲတဲ့ အီမေးလ်အစစ်ကို မြန်မာလို့ ပြန်ထားတယ် သေချာဖတ်ကြည့်တော့
လိုဂိန်ညာလှုပ်ရှားမူတွေ ဘယ်လောက်ကျယ်ဝန်းလဲ စဉ်းစားကြပတော့
( ARNO တို့ ARC တို့ အကြောင်းကို မသိရင်
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံသားပေးသင့် မပေးသင့် အပိုင်း (က) နဲ့ (ခ)ကိုဖတ်ကြည့်ပါ)
မြန်မာ နိုင်ငံကို မီးရှို့ နေသူတွေမှာ လိုဂိန်ညာတွေ လည်း ရှိသလို မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာ့သွေးစစ်စစ် နောက်ဆုံးစော်ဘွားရဲ့သားလည်းပါသည်၊ ဘိုးအေများထံသို့ သူပို့ သည့်အီးမေးလ်
သို့ / ရိုဟင်ဂျာ ညီအစ်ကိုများ ၊ မိတ်ဆွေများ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ
ခင်ဗျားတို့ တတွေက ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အိုအိုင်စီကို ဆော်ဒီမှာ ယူရိုဘားမားက တင်ပြဖို့ ကျွန်တော်ဆီကို စာရေးကြတယ်။ မြန်မြန်ပြန်မရေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
နောက်ကျတဲ့ ပထမအကြောင်းရင်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးနေတာရယ် နဲ့ အခြားဟာတွေရယ်ပါ။ အဓိက နောက်ကျရခြင်းကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ မစည်းရုံးလို့ ပဲ။
ပထမပိုင်းက အချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ မရှိ်ဘူးဆိုတာပြတယ်။ အိုအိုင်စီက ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းတင်ပြတာနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အချိန်မရွေး စိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့သတင်းတွေ ၊ ဒုက္ခသည်အကြောင်းတွေကို ဒီနှစ်အစမှာပဲ မေ့နေကြပြီ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြမှာ။ ဘယ်သူမှ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ဘုး။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ဘယ်အဖွဲမှာဘယ်သူဘယ်ဝါက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ် မဖြစ်ရဘုးလိ်ုအငြင်းပွားဖို့ အချိန်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂိုလ်ရေးတွေကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး အဓိက ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာရှေ့ ရေးကို အာရုံစိုက်ရမယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ မစည်းလုံးတာက တကယ့်ပြသနာပါ။ ယူရို ဘာမား အဖွဲအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ တွဲလုပ်နေတာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက။ စည်းလုံး ညီညွတ်ရမဲ့အစား အဖွဲ သေးသေးလေးတွေပဲ ကွဲသွားကြတယ်။ RSO နဲ့ ARNO ကွဲတာကိုတော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ လူတိုင်းသိတယ်။ ရိုဟင်ဂျား အမျိူးသား ဖိုရမ်ကို ၂၀၀၆ မှာလုပ်ပြီးတာနဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲတာပဲ။
၂၀၀၈ မှာတခေါက် အိုအိုင်စီကို စုပြီးတင်ပြဖို့ လုပ်သေးတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဖွဲ့ အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီး အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီထူထောင်ဖို့ အားလုံးကို ပေါင်းစည်းလိုက်ဖို့ အတွက်ပဲ။
ဒါပေမယ့် စစ်တကောင်း မှာလုပ်တဲ့အစည်းဝေးပြီးARNO, RSOနဲ့ ဒေါက်တာ ယူနက်စ်က နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ လုပ်ဖို့ သဘောမတူကြဘူး။ တခြားလူတွေကတော့ ARC က်ို ဖွဲ့ လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမယ့် ARC က ဆက်လက်မတည်တန့် ခဲ့ဘူး။
ပြီးတော့ ၂၀၀၉ မှာ ယူရိုဘားမားနဲ့အိုအိုင်စီနဲ့ARC (အာရကန် ရိုဟင်ဂျာကောင်စီ) ကို ပြန်ထူထောင်ဖို့ လုပ်နေကြတုန်း RSO ကို နှစ်ခြမ်းကွဲသွားပြန်တယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်သူ့ ကိုမှ အပြစ်မတင်လိုဘူး။ အသင်းတွေကွဲသွားကြတာမှာ ပြသနာတွေရှိလို့ ဆိုတာသိပေမယ့် အဖွဲကွဲနေတာတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်ကို အတူတူလက်တွဲ လုပ်နိုင်ကြမလား ? ကိုယ့်ကိုရေးကိုတာ တွေကိုဘေးချိတ်ထားနိုင်ပ့ါမလား။ အတူတကွ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို မေ့သွားကြလိမ့်မယ် ၊ အနာဂတ်မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဘက်က စည်းလုံးမူ မပြနိုင်ရင် အိုအိုင်စီကို အစည်းဝေးလုပ်ဖို့ မဖိတ်ချင်ဘူး။ နောက်ထပ် အသင်းကွဲရင်တော့ မျက်နှာပျက်စရာဖြစ်မယ်။ အိုအိုင်စီကလည်း ရိုဟင်ဂျာရေး စည်းဝေးတာတွေ လက်တွဲလုပ်တာတွေ လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့ စည်းလုံးပြဖို့ သေချာပြီလား ၊ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ မဟုတ်ရင် တင်ပြခွင့်တွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
(၁) ပထမ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တွေ ဖြစ်တဲ့ ARNO ၊ RSO နဲ့ လူမူရေးအဖွဲ့ တွေဖြစ်တဲ့ BRAJ ၊ BROUK တွေနဲ့ အစည်းဝေးလုပ်ကြရမယ်။ လုပ်ကိုင်ပုံတွေမတူပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဖို့ လိုတယ်။
(၂) နိုင်ငံရေး အဖွဲတွေ အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ မဟုတ်ရင် ပေါင်းလိုက်ရမယ်။ ၂၀၀၈ စစ်တကောင်းမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အစည်းဝေး ရည်ရွယ်ချက်က ပေါင်းစည်းဖို့ ပဲ
(၃) ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲစည်းက တကမ္ဘာလုံးက ရိုဟင်ဂျာအဖွဲစည်းတွေကို ဦးဆောင်မူပေးသင့်တယ်။ အဲဒါက လူမူရေး အဖွဲစည်းတွေကို ချုပ်ကိ်ုင်ဖို့ တော့ မဟုတ်ဘူး။
လူမူရေး အဖွဲစည်းတိုင်းက သူတို့ နေရာဒေသတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမူရေး အသင်းအနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုနေရမယ်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ဟာတွေကို လုပ်မယ် လူမူရေး အသင်းအထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် ဟာတွေကို ဆော်အောမယ်။
ဥပမာ၊ နိုင်ငံရေးအသင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး ၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာရေး အစရှိတဲ အဓိကအချက်လက်တွေကို အိုအိုင်စီနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို ဆော်အောနေမယ်။ လူမူရေး အသင်းတွေက နိုင်ငံရေး အချက်လက်တွေကိုထောက်ကူပေးမယ်။
မလေးတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ အခြေနေကောင်းအောင် ဆော်အောမယ်။
အဲဒါတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော် တောင်းဆိုချင်တာကတော့
၁။ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ARNO ၊ RSO ၊ NDPHR နဲ့ တခြားဖွဲက ခေါင်းဆောင်တွေ ကို ဆော်ဒီင်္မှာ အစည်းဝေးလုပ်ဖို့ ဖိတ်ပါ။ ကိုပါ နိင်ငံရေးအဖွဲကြီး ဖွဲဖို့ အတွက်ပါ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်
(က) RSO က နှစ်ခြမ်းကွဲနေတာကို ပေါင်းဖို့ ။ နောက်ထပ် မကွဲအောင် သဘောတူဖို့ 
(ခ)ARNO က ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေး အဖွဲအနေနဲ့ ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ အဖွဲ့ ကြီးသစ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အခြားသော အဖွဲ့ များနှင့် ဘယ်လို ပေါင်းစည်ရန်ဆိုတဲ့ ဟာတွေကိုခေါင်းဆောင်တွေတင်မြောက်ပြီး သူတို့ ရဲ့ တာဝန်တွေ။ ရန်ပုံငွေဘယ်လိုကောက်ခံမယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကို အကြမ်းဖြင့်တင်ပြရန်။
ကျွန်တော်တိုက အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ ဖြစ်နေရမယ်။ ခေါင်းဆောင် ဒုခေါင်းဆောင်းတွေ ထာပြီး အလုပ်မလုပ်ကြရင် အဖွဲ့ ဖွဲ့ တာတွေက အလကားပဲ။
(က) နဲ့ (ခ) မှာပါတဲ့ အချက်လက်တွေကို သဘောတူကြရင် အစည်းဝေးလုပ်ဖို့ ဖိတ်မယ်။ သဘောမတူကြရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အစည်းဝေးမဖိတ်ဘူး
၂။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပိုင်းအရ သဘောတူရင် ဂျက်ဒက်မှာ တစ်ရက်လောက် အစည်းဝေးလုပ်မယ်။ နိုင်ငံရေးပိုင်း လုပ်ပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာရေးဟောပြောပွဲကိုတစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်လုပ်မယ်
လူမူရေးပိုင်းကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမူရေး အဖွဲစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ တွေကို ဖိတ်ခေါ်မယ်။ ARC ကို ပြန်အသက်သွင်းဖို့ ပါ။ အဲဒါလုပ်ဖို့ ARC ရဲ့ဖွဲစည်းပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက်ို ပြန်သုံးသတ်ရမယ်။
ARCရဲ့ လုပ်ဆောင်ရပ်တွေနဲ့ ဖြစ်လာမှာကို အရင် သဘောမတူကြဘူးဆိုရင်တော့ တင်ပြစရာမလိုတော့ဘူး။
အဲဒီတော့ ညီအစ်ကိုတွေခင်ဗျား .. သဘောတူလား မတူလား ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပေးကြပါ။ အကြံပြုကြပါ။ ခရီးထွက်စရာ ရှိနေလို့ အီမေးလ် အဆက်သွယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး EBO Operation ဒါရိုက်တာ ဖြစ်တဲ့ ဂျက်ဆင်ဆီကိုပဲ ပြန်ဆက်သွယ်ပါ။
အထက်ကဟာတွေကို လုပ်နိုင်ရင်တော့ အိုအိုင်စီက သြဂတ် မဟုတ်ရင် စက်တင်ဘာလမှာ အစည်းဝေးထိုင်ဖို့ သဘောတူလိမ့်မယ်။
မူရင်းကို ဘာသာပြန် - Roma Rakha
မူဂျာဟစ် တို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ထွင်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသောေ...
ဂျာမဏီ သံအမတ်ကြီး နှင့် ကိုဇင်မင်ဦး တို့ အား ဒေါ်ေ...
၂၀၀၉တုန်းကဟန်ညောင်ဝေ ကဘင်္ဂလီများထံသို ပို့ သည့်အီးေ...